Maleeshiyaad ka tirsana Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn – Radio Muqdisho
Maleeshiyaad ka tirsana Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn
arbixin uu soo saaray Taliska ciidamada Africom ayaa lagu sheegay in duqeyn xagga cirka ah oo 15-kii bishaan lagu beegsaday kooxda Al-shabaab lagu dilay 8-ka tirsan maleeshyada kooxdaasi.
Howlgalkaasi oo ka dhacay goob 30-mayl u jirta magaalada Kismaayo ee dhinaca woqooyi galbeed ,ayaa warku intaa ku daray in lagu burburiyay hal gaari oo ay lahaayeen kooxdaasi.
Howlgkaasi waxaa fuliyay ciidamada Mareykanka oo gacan ka helaya ciidamada dowladda Federaalka ee Soomaaliya,iyadoo diyaaradaha Dronska loo adeegsaday weerarkii xagga cirka ee lala beegsaday maleeshiyaadka Al-shabaab.
Warkaan ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee fadhigoodu yahay Bariga Afrika ee (Africom),ayaa lagu sheegay in aysan jirin wax rayid ah oo wax ku noqday howlgalka dhinaca cirka ee lala beegsaday kooxda Al-shabaab,sida ay ku waarameen saraakiisha Africom.
Taliska ciidamada Africom,ayaa sheegay in ay sii wadayaan howlgalada dhinaca cirka ah ee lagu wiiqayo kooxda Al-shabaab ,waxaana warku intaa raaciyay in iyadoo gacan laga helayo ciidamada dowladda Federaalka ah la bartilmaameedsan doono meelaha ay gabaadka ka dhigtaan kooxdaasi iyo xarumaha ay ku tababartaan,
Danta guud ee Dalka halaga hormariyo danta gaarka ah (FAALLO)
Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka oo soo xiray Shirweynaha Qaran ee Dhalinyarada